သင်၏အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန် CRM ဒေတာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းရန် အဆင့်4ဆင့် Martech Zone
၎င်းတို့၏ အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်လိုသော ကုမ္ပဏီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုဗျူဟာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည် (CRM) ပလက်ဖောင်း။ ဘာကြောင့် ကုမ္ပဏီတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီးပြီလဲ။ CRM ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။၊ ကုမ္ပဏီများသည် မကြာခဏ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းကြသည်... သို့သော် အပြောင်းအလဲများသည် အကြောင်းပြချက် အနည်းငယ်ကြောင့် ကျရှုံးတတ်သည်-
ဒေတာများ - တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အကောင့်များနှင့် အဆက်အသွယ်များကို CRM ပလပ်ဖောင်းသို့ ဒေတာစွန့်ပစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်း ဒေတာသည် မဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းသော. အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင် CRM ကို အကောင်အထည် ဖော်ထားပြီးဖြစ်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ဒေတာများကို စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေ မထုတ်ပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည် (ရွယ်).
ဖြစ်စဉ် - အရောင်း CRM ကို အမှန်တကယ် လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်၊ ဦးဆောင်သူများ၏ အရည်အချင်းနှင့် လက်ရှိအကောင့်များ၏ ဦးစားပေးမှုကို တွန်းအားပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ရှိရပါမည်။ ကုမ္ပဏီများသည် အခွင့်အရေးအရှိဆုံးဖြစ်သော ဦးဆောင်သူများနှင့် အကောင့်များကို ဦးစားပေးရန် နည်းစနစ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
တာဝန်ကျ - ဦးဆောင်သူအသစ်များနှင့် လက်ရှိအကောင့်များကို ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် နယ်မြေစည်းမျဉ်းများမှတစ်ဆင့် CRM ဖြင့် မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ တာဝန်မရှိဘဲ၊ အရောင်းလှုပ်ရှားမှုကို တွန်းအားပေးရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။
သတင်းပို့ခြင်း - CRM နှင့် သင့်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ကို အလွယ်တကူလက်ခံနိုင်စေရန် သင့်အရောင်းအဖွဲ့နှစ်ရပ်စလုံးအတွက် တိကျသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ယုံကြည်နိုင်လောက်သော အစီရင်ခံချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရပါမည်။
မွမ်းမံနေ - သင်၏ CRM အတွက် အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် လက်စွဲအပ်ဒိတ်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဒေတာတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ CRM ကို မွမ်းမံမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပလက်ဖောင်းကို စွန့်လွှတ်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် မှီခိုရန် ပျက်ကွက်ပါသည်။
အဆင့် 1- သင်၏ CRM ဒေတာကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။
အကောင့်ဒေတာသည် သင့်လက်ရှိ CRM၊ သင်ပြောင်းနေသည့် CRM တစ်ခု၊ ငွေပေးချေမှုစနစ် ထုတ်ယူမှု သို့မဟုတ် စာရင်းဇယားများ အစုအဝေးအတွင်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်သော ဆိုးရွားသောဒေတာများစွာကို မကြာခဏ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် သေနေသော အကောင့်များ၊ မရှိတော့သော အဆက်အသွယ်များ၊ ဝယ်ယူမှုများ၊ ပွားနေသော အကောင့်များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမရှိသော အကောင့်များ (မိဘ/ကလေး) တို့အတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်သည်။
သင့်ဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ချိန်ညှိရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဆင့်များ ပါဝင်သည်-
validation - Third-party ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဒေတာသန့်ရှင်းရေး သင့်လက်ရှိဒေတာကို တရားဝင်၊ သန့်စင်ရန်နှင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ကုမ္ပဏီ၏ ပုံဆောင်ဂရပ်ဖစ်ဒေတာအပြင် အဆက်အသွယ်ဒေတာရှိ ကိရိယာများ။ ၎င်းသည် သင့်အဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် CRM အတွင်းရှိ ဆိုးရွားသောဒေတာကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းထက် တိကျသောအချက်အလက်များကို အာရုံစိုက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
status - အကောင့်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ဆက်စပ်ဝင်ငွေ၊ တာဝန်ပေးထားသော အရောင်းသမား၊ ဝယ်သူ၏အဆင့်နှင့် အဆက်အသွယ်များ၏ လက်ရှိအခြေအနေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် အသုံးမဝင်သော အဆက်အသွယ်နှင့် အကောင့်ဒေတာများစွာကို တင်သွင်းခြင်းထက် သင်၏ CRM အာရုံစိုက်သင့်သည့် မှတ်တမ်းများကို သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့်ဆင့် - အကောင့်များသည် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အထက်တန်းအဆင့် ရှိတတ်သည်။ အမှီအခိုကင်းသောရုံးများရှိသောကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်စေ၊ သုံးစွဲသူများစွာရှိသောအိမ်ထောင်စုဖြစ်စေ သို့မဟုတ်
စားပေး - သင့်အကောင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာဝင်ငွေကို တင်ပို့ခြင်းသည် အကြိမ်ရေ၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ငွေကြေးကို သတ်မှတ်ရန် စံပြနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် (RFM) ဝယ်ယူမည့် ဉာဉ်အပေါ်အခြေခံ၍ ဦးစားပေးရန် မက်ထရစ်များ။ ဤနည်းစနစ်ကို အခြေခံ CRM တွင် မကြာခဏ မပါဝင်ဘဲ ပုံမှန်အားဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အမှတ်ပေးရန်အတွက် ပြင်ပကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
နယ်မြေတွေကို – သင့်အရောင်းဝန်ထမ်းများကို အကောင့်တစ်ခုတွင် မည်သို့သတ်မှတ်ထားသနည်း။ ကုမ္ပဏီများသည် မကြာခဏဆိုသလို လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၊ နယ်မြေများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကို သင့်လျော်သောအကောင့်သို့ တွဲချိတ်ရန် ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ တာဝန်တစ်ခုရှိသည်။ သင့်လက်ရှိအကောင့်ကို ရှင်းလင်းရန် သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုတွင် သင်၏ CRM ကို တင်သွင်းသည့်အခါ၊ ဤတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စိစစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများကို သတိမပြုမိပါစေနှင့်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ CRM နှင့်အလုပ်လုပ်နေသော အရောင်းဝန်ထမ်းများကိုပင် ကန့်သတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အဓိက အကောင့်များကို အခြေခံ၍ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ဖြန့်ကျက်ရန် ကြိုးစားခြင်းထက် လုပ်ငန်းများစွာကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့် CRM ၏တန်ဖိုးကို မြင်ရန် အခြားအဖွဲ့များ လိုအပ်သော ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
သင့်ဝန်ထမ်းများသည် သင့်လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအား မကြာခဏဆုံးဖြတ်နိုင်သည်... နည်းပညာတတ်ကျွမ်းသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်းအဖွဲ့များသည် အသုံးပြုမှုကို မကြာခဏ တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ခွဲထုတ်ထားသော လုပ်သားအင်အားအစား သင်အသုံးပြုနေသော CRM ၏ လျင်မြန်သော ROI ကို မကြာခဏရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 2- သင်၏ပေါင်းစည်းမှုများကို CRM သို့တည်ဆောက်ပါ။
ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲ CRM သည် စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သင့်ဝန်ထမ်းများကို အလေးချိန်နှင့် တာဝန်အနည်းငယ်ပေးသည်။ သင်၏ CRM ကို ပေါင်းစည်းရန် လိုအပ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း သင်၏စနစ်များကို အကဲဖြတ်ပြီး သင်၏ CRM ဒေတာကို မြှင့်တင်ရန် မည်သည့်စွမ်းရည်များကို ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဆောင် - ဦးဆောင်သူများ၏ ဝင်ပေါက်အမှတ်အားလုံးကို လိုအပ်သောဒေတာအားလုံးနှင့် ၎င်းတို့ရောက်ရှိပုံမှ ရည်ညွှန်းသည့်အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ သင်၏ CRM တွင် ပေါင်းစည်းသင့်သည်။
စွမ်းရည်မြှင့် - သင်၏အရည်အချင်းနှင့် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကူညီပေးနိုင်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အဆက်အသွယ်အဆင့် အချက်အလက်များဖြင့် အကောင့်ဒေတာကို မြှင့်တင်ရန် မည်သည့် ပြင်ပပလက်ဖောင်းများ။
အထိအတွေ့များ - ဝယ်ယူသူ၏ခရီးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် သင့်တွင်ရှိသည့် ထိတွေ့မှုအမှတ်များ။ ၎င်းသည် ဆိုက်လည်ပတ်မှုများ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်များ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေမှု၊ ကိုးကားမှုစနစ်များနှင့် ငွေပေးချေမှုစနစ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်သည် CRM တစ်ခုအတွင်း သင့်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပြီး မကြာခဏဆိုသလို ရိုးရှင်းသောပေါင်းစပ်မှုများသည် သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်းအဖွဲ့များကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် သိသိသာသာ အထောက်အကူဖြစ်စေသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ တစ် ဒေတာရှာဖွေတွေ့ရှိမှု သင်၏ CRM နှင့် စနစ်များကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ရန် အလိုအလျောက်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် မည်သည့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့် 3- CRM ဖြင့် သင်၏ အရောင်းဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
ယခု သင့်တွင် အံ့ဖွယ်ဒေတာများရရှိထားပြီး၊ တိကျစွာသိရှိနိုင်ရန် နောက်တစ်ဆင့်မှာ သင့်ဝယ်သူ၏ခရီးကို နားလည်ရန်ဖြစ်သည်-
a ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်မီခဲ (MQL) သည် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဦးဆောင်တာဝန်ပေးသည်။
a ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ရောင်းအားအရည်အချင်းပြည့်မီသောခဲ (SQL) ဦးဆောင်သူသည် အမှန်တကယ်လိုက်စားထိုက်သော ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကနဦးတည်ဆောက်ပါ။ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်သွားစေရန် သင့်အရောင်းဝန်ထမ်းမှ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အဆင့်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်။ ၎င်းသည် သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို မျှဝေရန် သို့မဟုတ် သင့်ထုတ်ကုန်၏ သရုပ်ပြမှုတစ်ခုအဖြစ် မိတ်ဆက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ အချိန်နှင့်အမျှ စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်အားလျှောက်ထားပါ။ အရောင်းကတော့ခြေလှမ်းများ သင့်ရှိပြီးသား အကောင့်များသို့ သွားပြီး သင့်အလားအလာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်အဆင့်များကို သတ်မှတ်ပေးပါ။
သင့်တွင်သေချာပါစေ။ အရောင်းပြွန်ဒိုင်ခွက် ၎င်းသည် သင့်အကောင့်များသို့ ပုံရိပ်ယောင်နှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှု အစီရင်ခံစာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
သင့်တွင်သေချာပါစေ။ စွမ်းဆောင်ရည်ဒိုင်ခွက် ၎င်းသည် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှု အစီရင်ခံစာကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို နည်းပြနှင့် အကြံပေးနိုင်သည်။
ဤအဆင့်သည် သင်၏ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အရောင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုအတွက် လမ်းအတားအဆီးများဖန်တီးနေသည့် ထူးထူးခြားခြားပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် သင့်အဖွဲ့နှင့် ထိတွေ့လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအချိန်တွင် CRM ကိုအသုံးပြုရန် အပြုအမူနှင့် အလေ့အထများတည်ဆောက်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
ကုမ္ပဏီများစွာသည် ၎င်းတို့၏ CRM ကို ထူထောင်ကြပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အခွင့်အလမ်းများကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန် လူများ သိစေရန် CRM တွင် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို သိရှိစေရန်အတွက် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သင်တန်းများ ရှိသည်။ ကျွန်တော် မကြာခဏတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာကတော့ လူတွေက သူတို့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်ဘဲ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိုဂရမ်သည် ဤအပြုအမူများကို လိုက်နာမှုကို တွန်းအားပေးပြီး တိုင်းတာနိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း သုံးစွဲသူများနှင့် မန်နေဂျာများသည် ၎င်းတို့ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား စနစ်ထဲသို့ အမှန်တကယ် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ခံခြင်းမပြုရန် (တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍) ရွေးချယ်သည်။ အခွင့်အလမ်းသည် အချိန်နှင့် တပြေးညီ တိုးတက်နေပါသည်။
Ben Broom၊ Highbridge
အဆင့် 4- စွမ်းဆောင်ရည် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
ဖောက်သည်များ (အထူးသဖြင့် Salesforce) တွင် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်လာရာတွင် ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ၏ ပုံမှန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် အဆင့် 1 မှ3ဖြင့် စတင်သည်... သို့သော် အကြီးမားဆုံးသော ပြန်လာမှုကို မြင်သော ဖောက်သည်များသည် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှု စက်ဝန်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ဆက်လက် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပါသည်။ ငါတို့:
ခဲအမှတ်ပေး - ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ အကြီးမားဆုံးသော ဝယ်ယူမှုနှင့် ရောင်းလိုအား အခွင့်အလမ်းများကို အာရုံစိုက်နိုင်စေရန်အတွက် RFM ကို ၎င်းတို့၏ အထွေထွေ ဦးဆောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည့် လက်စွဲ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ် စွမ်းဆောင်ရည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အဆင့်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အရောင်းခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး - ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ အရောင်းခေါင်းဆောင်များအား ၎င်းတို့၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံခြင်း။ - ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အနာဂတ်တိုးတက်မှုကို ခန့်မှန်းနိုင်စေရန် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း (အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ပြင်ပ) အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များအတွက် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းကို ပြုစုပါသည်။
ဒါကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ CRM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အပြည့်အဝ နားလည်နိုင်ဖို့ အကဲဖြတ်မှု၊ ကိရိယာတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ တတိယအဖွဲ့အစည်းကို လိုအပ်တယ်။
CRM အောင်မြင်မှုကို သတ်မှတ်ခြင်း။
သင့် CRM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ဤပန်းတိုင်3ခုပြည့်မီသည်အထိ အပြည့်အဝ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါ။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - သင့်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် သင်၏ CRM အတွင်းရှိ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း အချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်မှုများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည် ။
လုပ်ဆောင်နိုင်မှု - ယခု သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်းအဖွဲ့တွင် သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် အနာဂတ်အတွက် အရောင်းမြှင့်တင်မှုတွင် ၎င်းတို့အား ကူညီပေးသည့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပန်းတိုင်များကို ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်သည်... လာမည့်သုံးလပတ်တွင်သာမကဘဲ။
ယုံကြည်မှု - သင့်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ယုံကြည် သူတို့ဝင်ရောက်နေတဲ့ data တွေထဲမှာ ယုံကြည် CRM တွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၎င်းတို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ တိကျစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတို့ကို ခန့်မှန်းခြင်း။
CRM အကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင် နောက်ပြဿနာတစ်ခုမှာ အရောင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏နံပါတ်များကိုရိုက်ပါ။ လေးပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် နှစ်ကုန်တိုင်းအတွက်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ CRM သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ဝယ်ယူမှုသံသရာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ကာလတိုအာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ Actionability သည် လာမည့် လျော်ကြေးခွဲတမ်းကို ကျော်လွန်ရုံသာမက၊ ကုမ္ပဏီအား နောင်နှစ်များအထိ အရောင်းလမ်းကြောင်းကို ကြီးထွားလာစေမည့် ပြုစုပျိုးထောင်မှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုယဉ်ကျေးမှုကို ထည့်သွင်းရန် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်။
ဤပန်းတိုင်တစ်ခုစီမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုမဟုတ်ပါ… အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် CRM တစ်ခုတွင် ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်လည်မရရှိမီ သုံးခုလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကုမ္ပဏီသည် CRM သို့ ပြောင်းရွှေ့နေသည် သို့မဟုတ် သင့်လက်ရှိ CRM ၏ အလားအလာကို သိရှိရန် ရုန်းကန်နေပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ်ရန် အားမနာပါနှင့်၊ Highbridgeကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သက်သေပြထားသော လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကိရိယာများနှင့် အဖွဲ့သည် မည်သည့်အရွယ်အစား အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ကူညီရန် အသင့်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CRM ဆော့ဖ်ဝဲလ်အစုံအလင်များစွာတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး Salesforce Sales Cloud တွင် ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ထုတ်ဖော်ချက်- ကျွန်ုပ်သည် ပူးပေါင်းတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး ပါတနာဖြစ်သည်။ Highbridge.
Tags: အနီးကပ်ရောင်းအားCRMcrm အလိုအလျောက်စနစ်crm ရှင်းလင်းရေးအတိုင်ပင်ခံcrm အတိုင်ပင်ခံcrm ဒေတာcrm ဒေတာရှင်းလင်းခြင်း။crm အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။CRM ပေါင်းစည်းမှုဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုhighbridgehubspot ဖြစ်သည်ခဲသွင်းခြင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်မီခဲmqlအရောင်းမိုcloud်းတိမ်အရောင်း dashboardရောင်းအားကတော့အရောင်းပြွန်ဒိုင်ခွက်အရောင်းလမ်းကြောင်း စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်း။အရောင်း ဦး ဆောင်မှုအရောင်းအခွင့်အလမ်းရောင်းအားစွမ်းဆောင်ရည်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရောင်းအားအရည်အချင်းပြည့်မီသောခဲရောင်းသူsalesforce အရောင်းမိုcloud်းတိမ်သည်
Swag ဆိုတာဘာလဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် တန်ဖိုးရှိပါသလား။